Uma usembonini yokukhanyisa ukwakheka komhlaba njengomkhiqizi, umklami wezibani, umsabalalisi, noma isichazi sezakhiwo, uzodinga ukubhekisa amafayili wohlelo lwe-IES photometric ukuze uqonde ukukhishwa kwangempela kwamandla okukhanya nokukhanya kwamalinki ofisa ukuwafaka imiklamo. Okwe ...
Amathrendi ekukhanyeni kwezebhizinisi: Ukuguquguquka nokusebenza kahle
Isikhathi sedijithali besiyinguquko yangempela emhlabeni wezentengiso. Ukuvela kwezohwebo ze-elekthronikhi kudinga ushintsho lwendlela ekwakhiweni kwamasu wokuhweba. Kuleli qiniso elisha, iyiphi indima edlalwa yizitolo zomzimba? Izindawo zendabuko zokuhweba zibhekene nenselelo engakaze ibonwe: ...
Kulezi zinsuku, leli dolobha liyisiteji esikhulu lapho izimpilo zabantu zenzeka khona. Uma sibheka ukuthi iningi labantu emhlabeni lihlala ezindaweni ezisemadolobheni nokuthi lo mkhuba uyanda nje, kubonakala kufanelekile ukuhlaziya ukuthi lezi zikhala ziguqulwa kanjani nokuthi yiziphi izinselelo ezibhekene nazo ...